6 enganonyorwa dzenhoroondo. De Roa, Pellicer, Lara, Durham, Aurensanz uye Molist | Zvazvino Zvinyorwa
6 enganonyorwa dzenhoroondo. De Roa, Pellicer, Lara, Durham, Aurensanz uye Molist
Mahoridhe, mahombekombe, dziva rekushambira, lounger ezuva, kurara kwekusingaperi, nguva yemahara ... Kutsvaga kukamurwa pakati peanotapira, nhabvu, ice cream nezvinwiwa. Zviyeuchidzo zvezviyeuchidzo, zveimwe ndangariro dzeimwe nguva yezhizha, yeimwe nguva. Uye pfungwa dzakasununguka kuti uwane dzimwe nyaya.
Aya ndiwo mabhuku enhoroondo nhanhatu nevanyori vatanhatu vanoziva nyaya dzakaita saJorge Molist, Sebastián Roa kana Carlos Aurensanz. Asi ivowo ndiDavid A. Durham, Javier Pellicer naEmilio Lara.
1 Chimurenga - David A. Durham
2 Iyo Clockmaker kuPuerta del Sol - Emilio Lara
3 Rwiyo Rweropa uye Ndarama - Jorge Molist
4 Shumba dzaHannibal - Javier Pellicer
5 Iye anobheja mambo - Carlos Aurensanz
6 Iyo mhumhi-al-Andalus - Sebastián Roa
Kumukira - David A. Durham
Iri ndiro bhuku idzva nemunyori anotengesa zvakanyanya Kuzvikudza kweCarthage. Iko kutsva kutsva pamufananidzo usingafi we Spartacus, gladiator ane mukurumbira, uye kumukira kwevaranda kwaakatungamira uye akapotsa akunda Roma nemauto ayo asingakundike. IAmerican Durham, zvakare munyori weanoyevedza ngano, anotiudza izvo zvingangove kupanduka kwakakurumbira munhoroondo kubva kwakasiyana uye kunopokana maonero.
Vachava vake Spartacus, gladiator uyo kutsunga kwake uye, pamusoro pezvose, charisma huru inoshandura mukana wejeri kuita kupandukira kwetsika dzinozopokana neumambo. Zvakare kubva kune izvo zve Astera, ane hukama nenyika yemidzimu nemashura ayo anotungamira kusimudzira kupandukira.
Isu tinozvionawo nemaziso e Nonnus, UN Musoja weRoma uyo anofamba pamativi ese emakakatanwa mukuyedza kuchengetedza hupenyu. Uye kubva kune izvo zve Laelia naHustus, vana vaviri vanofudza izvo zvinoenda nevaranda. Uye tinozviona kubva kudivi revaRoma, ne Kaleb, muranda mubasa raCrassus, seneta weRoma uye mutungamiriri akapa basa rekupwanya kumukira kwevaranda kwainzi kwakareruka.
Iye anogadzira wachi paPuerta del Sol - Emilio Lara
Lara, jiennese, chiremba muAnthropology uye akapedza kudzidza muHumanities, anotitora isu kuenda 1866 London uye inotizivisa kune nhoroondo ye murume chaiye asingazivikanwe kune vakawanda vaverengi. Zvanga zviri Jose Rodriguez Losada, mugadziri weLeonese akavaka angangodaro mawachi maviri ane mukurumbira pasi rose, iwo e Puerta del Sol naBig Ben.
Mune inoverengeka, nekuda kwezvematongerwo enyika zvikonzero Losada ane nhapwa weyechokwadi Spain weFernando VII uye iye zvino anogara muLondon, kwaachagashira kurongeka kwekukurumidza kugadzirisa big ben. Asi kune mumwezve munhu kubva munguva yake yakapfuura uyo anomutarisa kuti apedze hupenyu hwake. Asi panguva ino, José anongogara uye anoshanda kuvaka wachi ine echimurenga michina. Mubvunzo uchave wekuti unozobudirira here kana kuti kwete.
Rwiyo rweropa negoridhe - Jorge Molist
Mumwe wea greats eiyo enhoroondo genre ndiMolist uye ino novel yave iri Fernando Lara Mubairo gore rino. Mariri anotiudza nyaya ye Constance, uyo ane makore gumi nematatu chete, anofanirwa kusiya mhuri yake, nyika yake uye zvese zvaanoda kuroora mutorwa mukuru kwaari. Baba vake, mambo wesicily, iri munjodzi huru uye inoda mubatanidzwa iwoyo. Asi Charles weAnjou, hama yaMambo weFrance, anopinda muumambo achihuuraya.
Peter III, Murume waConstanza anogadzwa Mambo weAragon uye anovimbisa kuti achatsiva baba vake odzoreredza humambo hwaari mugari wenhaka. Pedro, anofungidzirwa samambo asina kusimba, anotarisana nemasimba makuru matatu ezana ramakore regumi nematatu: France, papa naCharles weAnjou, vakashandura mambo weMediterranean.
Hannibal Shumba - Javier Pellicer
Uyu munyori weValencian anopa yake nyowani nyowani kwatinoenda Iberian peninsula kubva muzana ramakore rechitatu BC. C. Mutungamiri wemauto eCarthage ndiye Hannibal Barca uye mavari vanhu vazhinji veIberia vanoungana avo vakamubatana naye. Hannibal anoda kukunda Roma uye, nekuda kweizvi, kuyambuka Alps mune yakakura kuita inowanikwa nemunhu kusvika ipapo. Ipapo ndipo paachasangana Publius Cornelius Scipio mauto ake achawira pasi pamberi pake. Parizvino ...
Iyo ine nyeredzi nhatu mavara, imwe neimwe yakatosiyana: Leukon, muCeltiberian uyo anopinda muhondo achisiya mudiwa wake kumashure; falcon, muSaguntine weIberia anoshungurudzwa nemhosva yekupandukira; Y Tabnit, mukuru weCarthage anochengeta chakavanzika chisingataurike.
Mambo wekubhejera - Carlos Aurensanz
Rimwe zita rakakurumbira rerudzi uye munyori weiyo trilogy ye Banu qasi, munyori weNavarrese uyu anotipa ino nyowani nyowani.
Isu tiri mu umambo hweNavarre muna 1188. Tudela anogadzira Dare uye anorarama kwenguva pfupi yekuchenesa. Guta rese riri kushanduka mushure mekudzinga maMuslim. Iyo kereke nyowani yekubatana Iri kuvakwa uye zvakafanira kutora nzvimbo yeiyo yekare mosque. Nicolás, anodzidzira stonemason wekuBurgundi mavambo, anoshanda pakupaza kwaro kana pavement inoita kunge iri pasi petsoka dzake.
Paanodzoka pakati pehusiku achawana chakavanzika chakavanzika uye, imomo, zvinoita kunge chakanganikwa, bhokisi Muslim ane yematehwe mukati. Ikoko ndiko kuchave kuwanikwa kunoratidzira kwete kungoitika kwayo chete, asi yeavo vese vanoziva nezve kuvapo kwayo, iyo yehumambo hweNavarre pachayo uye, pamwe, iyo yechiKristudhomu chose.
Mhumhi-al-Andalus - Sebastian Roa
Mumwe munyori wenhoroondo, Roa ndiye Aragonese nekuzvarwa uye Valencian nekutorwa, uye ine nhoroondo refu yekubudirira.
Mune ino novel isu tiri pakati pezana remakore rechiXNUMX. Rudzi rwekupedzisira rudzi rwe Al Andalus inguva yayo yakanaka kwazvo. Uye kumusoro kwehumambo kune murume nemukadzi. mhumhi mambo, chizvarwa chechiMuslim chevaKristu uye akasvika pachigaro cheumambo nezvakakodzera, akaomeswa muhondo dzepamberi uye mucherechedzi akatendeka wemitambo yake nemaKristu; uye chaunofarira, Zobeida, mukadzi ane runako runoshamisa uye akangwara, uyo anotsvaga kuzadzisa chiporofita chinoshamisa.
Asi mhiri kweStrait ivo vari kurodza zvombo zvavo mauto eAlmohad, muchina wemauto unotongwa nekunyanyisa kwakasiya makomo eAfrica ku kutsakatisa makristu. Zvichakadaro, maKristu eIberian Peninsula vanoita kunge vane hanya nemakwikwi avo pane kubatana pamwechete kudzivirira nyika. A) Ehe, King Wolf naZobeyda chete ndivo vanomira pakati pevapambi nemadzimambo ekuchamhembe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » 6 enganonyorwa dzenhoroondo. De Roa, Pellicer, Lara, Durham, Aurensanz uye Molist
Sir Tim O'Theo weRAF. Bruguera Classics adzoka nekuti ...
Matikitivha gumi ausingazokwanise kumira kuverenga zhizha rino.